Rovedzera Munhu Wako WeMukati
"Musaramba muchizvienzanisa namaitiro enyika ino, asi mushandurwe nokuvandudzwa kwepfungwa dzenyu ..." (VaRoma 12:2).
Simba remunhu zhinji riri mumweya wake. Harisi mumunhu wekunze. Harisi mumuviri wenyama. Ndiko kusaka uchifanira kurovedzera mweya wako. Murovedzere kudarika zvimwe zvose.
Munyika mune dzidzo dzakasiyana siyana. Dzidzo idzi dzinenge dziri kutsvaka kuwedzera ruzivo rwemunhu. Dzinenge dziri kutsvaka kuumba pfungwa dzemunhu. Asi munhu anenge ari kudzidziswa wacho munhu wekunze. Izvozvo hazvina kukwana. Munhu wemukati ndiye anofanira kudzidziswa. Ndiye anozovhenekera munhu wekunze. Ndiye anogona kubata njere. Asi anodzidziswa neShoko raMwari. Anodzidza paunenge uri kufungisisa Shoko raMwari. Anodzidza panenge uri kudzeya Shoko iri mumoyo mako.
Shoko raMwari ndiro rinokubatsira kuziva munhu chaiye. Ndiro rinokubatsira kuvandudza hupenyu hwako. Hunovandudzika paunenge wavandudza mweya wako. Verenga ndima yatavhura nayo zvekare. Iri kutaura pamusoro pekudzidzisa munhu wemukati. Inoti, "... mushandurwe NOKUVANDUDZWA KWEPFUNGWA DZENYU". Pfungwa dziri mumunhu wemukati.
Pane zvinhu zviviri zvinoitwa kana uchirovedzera munhu. Unomuudza. Zvekare, unomukurudzira kuita zvaadzidza. Zvino, ungada kurovedzera mweya wako. Unofanira kuita zvimwe chete izvi. Mukurudzire kuita Shoko raMwari. Zvijaidze kutungamirirwa nemweya wako pakurarama. Zvijaidze kushandisa meso emweya wako kuvona. Zvidzidzise kurarama nemweya wako. Chirega kuramba uchivona zvinhu nemeso enyama. Zvivone nemeso emweya.
Rangarira zvataverenga mundima yatavhura nayo. Yati, "... Musaramba muchizvienzanisa namaitiro enyika ino ...". Saka haufaniri kurarama sevanhu venyika ino. Haufaniri kufunga savo. Haufaniri kuvona nenzira yavanovona nayo. Izvi ndizvo zviri kutaura ndima iyi. Unofanira kushanduka. Asi unofanira kuvandudza pfungwa dzako. Unofanira kudzizadza neShoko raMwari.Â Ndiko kuti ugone kushanduka. Ndiko kuti ugone kufunga nenzira itsva.
Kuda wanga wajaira kukundikana. Wava kufanira kuzvivona semunhu anobudirira. Shoko raMwari ndiro rinotaura kuti unobudirira. Kuda wanga uchifunga kuti uri mutadzi. Kuda wanga uchifunga kuti haungafadzi Mwari. Asi wava kufanira kushanduka. Zvivone sekururama kwaMwari. Warurama nekuti wava muna Kristu Jesu. Wava nemafungiro matsva. Wava nemafungiro evanhu vakarurama. Mafungiro aya anouya nekudzidzisa munhu wemukati.
Ini ndinofunga semunhu akarurama. Ndinogara ndakagadzirira kutungamirirwa naMweya vaMwri. Ndinogara ndakagadzirira kupiwa mazano avo. Ndinobvuma kutungamirirwa naMweya Mutsvene. Saka ndinogara ndichikunda. Muzita raJesu. Ameni.
Mapisarema 16:7 AMPC